पूरा गर्न कसरी माथि एक केटी अनलाइन
हामी सबै को लागि शूटिंग छन् तारा, यो आउँछ विशेष गरी जब प्रेम र. हामी माध्यम जान दर्जनौं फोरम सिक्न कसरी व्यवहार गर्न, हामीलाई केही राख्न प्रयास गर्दा पनि आशा छ एक गुब्बारा जस्तै छ । हामीलाई केही, तथापि, देख्न डेटिङ छैन रूपमा एक दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हजार बाधा र चुनौतीहरू । तिनीहरूले बस आनन्द बैठक नयाँ मान्छे र छैन बारेमा सम्बन्ध मुद्दाहरू. तर हामी सबै अनलाइन जाने समय देखि समय को लागि भनेर विशेष क्षण संग सुन्दर आगन्तुक । किन छैन । हामी राख्न मा प्रगति यो डेटिङ गर्न आउँदा. सम्बन्ध छैन एक वास्तविक-समय विषय मात्र । कि वाहेक, अनलाइन बैठक सधैं बढ्छ आत्म-विश्वस्त र यसको पाउन सजिलो कुराकानी स्टार्टर । यो छ रूपमा, समय- छ । तपाईं शाब्दिक च्याट मा जाने । जबकि वास्तविक जीवनको कुरा समय को एक धेरै आवश्यकता र प्रयास, अनलाइन कुराकानी गर्दै धेरै सजिलो छ । बस बताउन आफ्नो हेर्नुहोस्-एक-अर्थात्, कि तपाईं एक सानो व्यस्त छ, वा जवाफ जब तपाईं पुन केही समय स्पेयर गर्न प्राप्त गर्न प्रत्येक अन्य थाह छ । यो तरिका सजिलो छ । प्रकार को, एक व्यक्ति तपाईं ल्याउन सक्छ केही कुराकानी. ती मान्छे को लागि, अनलाइन-कुराहरु हुन देखिन्छ, एक सिद्ध संस्करण. तपाईं सक्छ केही स्मार्ट टिप्न-अप लाइनहरु पठाउन, को विषय मा आफ्नो आपसी चासो, वा बस छिटो विचार. कहिलेकाहीं बस एक नजर देखि एक वास्तविक व्यक्ति एक चुनौती हुन सक्छ.
नयाँ मान्छे पूरा अनलाइन र सुरु वा रहन एक साँचो व्यक्ति यो तपाईं सम्म छ. तर के स्पष्ट छ, हामी सबै आवश्यकता केही अतिरिक्त-समर्थन मा केही विषयहरू समयमा कुराकानी. भने, उदाहरणका लागि, एक केटी सोधे तपाईं एक मूर्ख प्रश्न बारे मौसम को को खेल, र तपाईं त्यागेर हेरिरहेका, यो एक मा, तपाईं हुन सक्छ वा नहुन सक्छ आफैलाई मदत बाहिर । राम्रो पक्रेको छैन ती लागि झूट, जवान मानिस । यो स्वीकार, हामी सबै एक हुन चाहनुहुन्छ अधिक र को नजरमा प्रिय व्यक्ति हो । अनलाइन बैठक छैन रूपमा. तपाईं देख्न भने कि सम्बन्ध वास्तवमा बाहिर काम छैन साथै तपाईं तिनीहरूले हुनेछ लाग्यो, के तपाईं बस भाग्य उम्कन र ब्लक व्यक्ति वा नम्रता भनेर बताउन कुराकानी भएको छ । फेरि, टी आवश्यकता धेरै साहस र तपाईं महसुस गर्नेछन् एक तत्काल राहत को सट्टा सम्झेर ती दुःखी आँखा. नोट: प्रतिस्थापन, छान्ने बताउन सबै अनलाइन छ भने तपाईं भएको बैठक वास्तविक जीवन मा, किनभने यो धेरै कम छ र अशिष्ट अन्त गर्न सम्बन्ध जस्तै कि.
मान्छे को एक धेरै वास्तविक जीवन मा डराउँछन् या बस गर्न सकिँदैन प्राप्त विपरीत सेक्स संग किनभने आफ्नो विनयी छ । त्यसैले, तिनीहरूले आउन सहायता गर्न इन्टरनेट को, तपाईं आराम गर्न सक्छन् जहाँ र प्रवेश छैन बाँच्न संचार छ सम्म एक वास्तविक आपसी चासो देखि पत्राचार । सामाजिक सञ्जाल सशक्त मान्छे । यहाँ एक कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ संग, धेरै मान्छे एकै पटक र छनौट आफ्नो वा उनको नजिकका आत्मा जुम्ल्याहा. मान्छे भेट्न अनलाइन र आफ्नो आत्म-सम्मान बढावा हुनेछ. आजकल धेरै मानिसहरू मा छन् फैलाउने मा आफ्नो फोटो सामाजिक नेटवर्क व्यवस्थापन गर्न । सबैका लागि प्रतीक्षा छ कदर रुचि र टिप्पणी अन्तर्गत आफ्नो प्रोफाइल फोटो । यसको यति राम्रो प्राप्त गर्न एक प्रशंसा देखि आफ्नो मित्र वा अपरिचित । यो साँच्चै बढ्छ हाम्रो आत्म-एस्टीम.
यदि यो भयो तपाईं नयाँ मान्छे पूरा अनलाइन, तपाईं शायद थाह छ कि भावना को पनि छन् भने सय र हजार किलोमिटर बीच. अब हामी अनलाइन-च्याट, र धेरै अन्य सहयोगीहरू लक्ष्य प्राप्त गर्न नजिक रही एक निश्चित व्यक्ति । कमी को प्रत्यक्ष संचार । कुनै पनि भर्चुअल संचार, कुनै कुरा कसरी अद्भुत छ, कहिल्यै प्रतिस्थापन एक प्रत्यक्ष कुराकानी, जहाँ शब्दहरू छन् पछि, भावना इशाराहरू र अनुहार अभिव्यक्ति गर्न । हामी धोका हाम्रो आशा बैठक पछि. दुर्भाग्यवश, संग भर्चुअल संचार केही लक्षणहरु को वार्ताकार धेरै गाह्रो हुन सक्छ बुझ्न. र यहाँ आउँछ परिणम निराशा मा संक्रमण बाँच्न संचार । मा एक भर्चुअल पत्राचार, एक व्यक्ति आदर्श हुन सक्छ, तर दैनिक जीवनमा, यो हुन सक्छ, आफ्नो व्यक्ति को प्रकार मा सबै. लत गर्न भर्चुअल संचार । धेरै मान्छे बन्न पृथक मा इन्टरनेट र बस रोक्न संचार जीवित छ । इन्टरनेट जस्तै, एक माकुरा मा यसको नेट छ । मान्छे आदी गर्न सामाजिक नेटवर्क मा संचार. र यो सबैभन्दा खराब कुरा हो । त्यसैले, फर्केपछि हाम्रो प्रश्न: के इन्टरनेट परिचितों साँच्चै काम । निश्चित, कुरा, तिनीहरूले के । यो गर्न मात्र महत्त्वपूर्ण छ पत्ता विषाक्त र गैर-प्रभावकारी साझेदार. सयौं छन् र सयौं बारे पाएका छन् जो मानिसहरू आफ्नो राम्रो आधा मा इन्टरनेट । तिनीहरूले च्याट, प्रत्येक अन्य चिन्न, कुराकानी, निर्णय, योजना । यसको जस्तै एक सुन्दर इन्टरनेट सपना कथा । तर मुद्दा छ जब तपाईं चाहनुहुन्छ हस्तान्तरण गर्न यस अनलाइन रोमान्स मा केहि अधिक गम्भीर छ । मेरो मित्र फेला एक केटी मा एक अनलाइन-खेल च्याट. चाँडै तिनीहरूले डेटिङ सुरु मा एक धेरै रोचक तरिका थियो यो डेटिङ. पछि लगभग एक वर्ष को आपसी भावना मान्छे उड निर्णय गर्न उनको देश मा पूरा गर्न को लागि पहिलो पटक हो । यो थियो एक साँचो निराशा लागि एक मानिस छ जसले यति पैसा खर्च गरेको र प्रयास गर्दा केटी उहाँले भेट अस्वीकार उहाँलाई जस्तै उहाँले थियो, अभद्र गर्न उनको मित्र छैन र उनको प्रकार पनि । म अनुमान उहाँको प्रतिक्रिया थियो. (बेनामी आगन्तुक) म भेट गरेका छन्, मेरो पति मा मसीही साइट छ । उहाँले थियो एक बीचमा-वृद्ध मानिस छ, धेरै सुन्दर र दयालु, उहाँले कुरा गर्न मेरो हृदय पछि केही महिना, उहाँले प्रस्तावित गर्न उत्प्रेरित गर्न यूटा.
म सकिँदैन विश्वास छ कि यस्तो मान्छे हुन सक्छ
यो जस्तै देखिन्छ थियो, एक भाग्य छ । (पेश प्रयोगकर्ता) पढेपछि ती दुई पूर्णतया विभिन्न कथाहरू तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ कि एक परिणाम हुन सक्छ, एकदम फरक छ । तपाईँ जारी एक सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने संक्रमण देखि अनलाइन — रियल-जीवन स्थिति? भने जवाफ सकारात्मक छ, हामी हुनेछ अर्को मा सार्न विषय हो । जब तपाईं पूरा गर्न सक्छन् बालिका अनलाइन. जवाफ छ, अधिक सरल छ । त्यहाँ लगभग एक हो कि साइटहरु विकास गर्न मदत पाउन एक राम्रो आधा । ती हुन्: डेटिङ साइटहरु, -समूह च्याट लागि समान हित संग, र, को पाठ्यक्रम, सामाजिक मिडिया सहित, र यति मा । तपाईं बाहिर जाँच गर्न सक्छन् समीक्षा कुनै पनि निर्णय गर्न तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ गर्न छडी. जब तपाईं पूरा महिला ? हरेक अनलाइन बैठक उपयुक्त हुनुपर्छ, त्यसैले मन तथ्यलाई तपाईं शायद हौं दुई अलग र मान्छे रात मा धेरै सुखद छ । बरु सोध्न, को अवधि लागि दिन जब यसको सुविधाजनक कल वा पाठ । त्यो हुन सक्छ बैठक मा छ, जबकि तपाईं एक गरिब केटी संग सूचनाहरू.) आफ्नो प्रोफाइल भरिएको महत्त्वपूर्ण जानकारी । मात्र आफ्नो पहिलो र अन्तिम नाम वा त्यहाँ भन्दा बढी केही छ, एक उपनाम त्यहाँ, त्यसपछि कुनै कुरा तपाईं प्रयास कसरी कठिन फसाउन केटी संग आफ्नो सन्देश, त्यो गर्न असम्भाव्य छ तपाईं जवाफ छ । किनभने यो सबै जस्तै देखिन्छ एक नक्कली बोट वा केही उनको मित्र गर्ने निर्णय गर्न खेल मा एक चाल छ उनको । किन कि तपाईं को आवश्यकता बाहिर भर्न आफ्नो प्रोफाइल स्पष्ट र सही भनेर, यी सबै अनावश्यक प्रश्नहरू गायब हुनेछ । यो पर्याप्त छ लेख्न केही अंक: शहर, उमेर, आफ्नो वास्तविक पहिलो र अन्तिम नाम, अपलोड राम्रो फोटो छ । यो आवश्यक न्यूनतम बस हुनुपर्छ.
आफ्नो प्रोफाइल छ, तपाईं (आफ्नो भर्चुअल आत्म-चित्र)
आफ्नो आत्म-अभिव्यक्ति हो । त्यसैले, आफ्नो अनुहार धुनुपर्छ अघि देखाउने यो संसारमा. छ) पहिलो कुरा हो कि कुनै पनि केटी याद हुनेछ छ आफ्नो उपस्थिति । यदि तपाईं अपलोड एउटा पुरानो फोटो को, त्यसपछि आफैलाई दोष. कोही होइन हुनेछ तपाईं जवाफ छ । फोटो हुनुपर्छ नयाँ र राम्रो गुणवत्ता ।, तपाईं कहाँ छन् मा केही सुन्दर ठाउँ वा अर्को रोचक कुरा त, यो हुन सक्छ एक. अपलोड केही तस्वीरहरु आफ्नो मित्र संग (सभ्य फोटो छैन, केही क्लब). यो राम्रो हुनेछ भने आफ्नो मित्र हेर्न योग्य र चिटिक्क मा, खेल सूट संग र रक्सीको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा — परिवर्तन र अपडेट गर्न आफ्नो फोटो देखाउन, कि तपाईं बाँच्न एक रोमाञ्चक जीवन यात्रा गर्न जाने, सुन्दर ठाउँमा छ । ब्याज केटी को वृद्धि हुनेछ, र त्यो हुनेछ, जारी राख्न चाहनुहुन्छ संचार । आफ्नो तस्वीर हो, आफ्नो जीवन शैली ।) छोड विषय धर्म र राजनीति छ । पनि भने, तपाईं गम्भीर चिन्ता लागि राजनीतिक अवस्था, देश मा या तपाईं एक सुपर नास्तिक, तपाईं आवश्यकता छैन बारे पोस्ट गर्न यो छैन क्रम मा देखा एक कट्टर. एक केटी बस भन्ने विचार सक्छ, तपाईं पुन एक पागल व्यक्ति, जो प्रयोग सामाजिक नेटवर्क जस्तै एक प्रवक्ता लागि आफ्नो विचार छ । दूर रहन देखि यो जस्तै केहि, किनभने आफ्नो मुख्य लक्ष्य पूरा गर्न बालिका अनलाइन, र छैन छलफल गर्न राजनीतिक दृश्य ।) आफ्नो फिड धेरै महत्त्वपूर्ण छ । प्रयास भर्न खण्ड मा आफैलाई बारेमा धेरै सकेसम्म जोगिन, टिकट र लेख्न छैन नक्कली कुराहरू जस्तै व्यावसायिक गिटार- मा जब सामान्य खेल्न एक गीत छ । लेख्न बारेमा आफ्नो मनपर्ने पुस्तकहरू, चलचित्रहरू — यो हुन गरौं भन्दा बढी को एक मानक सेट, प्रयोगकर्ता गर्न प्रयास बाहिर खडा र पूरा गर्न सक्षम हुन, मान्छे अनलाइन. थप केही उत्तेजक उद्धरण र भोइला — कम से कम, त्यो उत्सुक हुनेछ बारेमा के एस मा आफ्नो टाउको र कस्तो मान्छे लेख्छन् जस्तो । र यसको मतलब यो हो कि तपाईं आफ्नो लक्ष्य हासिल. माथि योग गर्न म चाहनुहुन्छ गर्न इच्छा हुन तपाईं बुद्धिमानी र विश्वस्त, साँचो र अनुकूल छ । मान्छे सधैं लागि पर्नु इमानदारिता, छैन नक्कली वा टिप्न-अप लाइनहरु । हुन मा एक हीरा सस्तो थुप्रो फोहोर भनिन्छ सामाजिक मिडिया, बुद्धिमानीपूर्वक आफ्नो साथी छनौट र साधारण हुन खुसी छ । अनलाइन महिलाहरु को लागि प्रतीक्षा गर्दै छन्, एक राजकुमार तपाईं जस्तै
← पूरा गर्न कसरी माथि एक केटी अनलाइन
डेटिङ महिला सीट - भिडियो-खोजी इन्जिन →